App. 4 abantu Rustico del Conero
Indawo yam yokuhlala ifanelekile izibini, abahambi bodwa, abahambi beshishini, iintsapho (kunye nabantwana), amaqela amakhulu kunye nabahlobo abanoboya (izilwanyana zasekhaya).
"I-Rustico del Conero" isembindini wePaki yeConero, ejikelezwe buhlaza kunye nendawo entle yendalo, etyebileyo kwizithethe zakudala.
I-Rustico del Conero yi-oasis yoxolo kwindawo eluhlaza yeConero Park, ehlala imizuzu emi-5 ukusuka e-Ancona (kufuphi neendawo eziphambili zezemidlalo) kunye neekhilomitha ezili-6 ukusuka elwandle (Portonovo, Sirolo, Numana, njl.) kunye neekhilomitha ezimbalwa ukusuka elwandle. kakhulu nemizana ezintle aphakathi weentaba Marche.
I-B&B yazalwa ngenxa yothando lwabaniniyo yokubonelela ngendawo apho kulula ukufumana unxibelelwano nendalo kwindawo yosapho eyenziwe ngezinto ezilula, eziyinyani kwaye ezihambelana nokusingqongileyo.
Ukujikelezwa yindalo enqabileyo, izandi zayo, imbono elahlekileyo emehlweni, idala umoya womlingo kwabo bahlala kule ndawo, nokuba ziintsuku ezimbalwa.
Ukusuka kuhlaziyo lwakutsha nje, amagumbi amancinci anefanitshala athambileyo adalwe anegumbi lokuhlala elinekhitshi, igumbi lokuhlambela, amagumbi okulala kunye ne-mezzanine enebhedi enye. Ulwakhiwo, olwakhiwe ngentlonipho kumntu kunye nokusingqongileyo, lufaneleke ngokukodwa ukhenketho lwexesha elitsha olujoliswe ekuphumleni umzimba nengqondo.
U-Il Rustico del Conero uye wafumana uphawu lomgangatho we-Ospitaliatà Italiana.
Ngaphakathi kwezindlu kukho isikolo sokukhwela apho iindwendwe zinokukhwela amahashe eMonte Conero.j
Sintywiliselwe emaphandleni ePaki yeConero, enezityalo ezichumileyo kunye nokulima okuphilayo, uxolo kunye nolawulo lokuthula.